दाउद इब्राहिम संगठित अपराधबाट आतंकवादतिर लागेपछि भारतलाई तनाव, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
दाउद इब्राहिम संगठित अपराधबाट आतंकवादतिर लागेपछि भारतलाई तनाव
एजेन्सी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् (यूएनएससी) मा भारतीय राजदूत सैयद अकबरुद्दीनले दाउद इब्राहिमको मुद्दा उठाएका छन् । उनले मंगलबार यूएनएससीमा दाउदको अपराध शृङ्खला नेटवर्किङमा परिवर्तन भएको बताएका छन् ।
यूएनएससीमा मंगलबार भएको अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षाको लागि खतराको विषयमा खुला विचार राखिएको थियो । यसैक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारी संगठन र आपराधिक संगठनबीच के के कुरा जोडिएका छन् त ? भन्ने विषयमा धारणा व्यक्त गरिएको थियो । सन् १९९३ मा मुम्बई बम विष्फोटको आरोपी दाउद भारतका ‘मोस्ट वान्टेड’ अपराधी हुन् ।